ရင်နာခဲ့ရတဲ့နေ့ | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » တဂ်ပို့စ် » ရင်နာခဲ့ရတဲ့နေ့
ရေးသားသူ : မိုးသက် // 5:38 PM
Posted by မိုးသက် at 5:38 PM Read more
မဒမ်ကိုး March 14, 2012 at 6:22 PM
ဟေ. ပြောတော့နိုင်ငံတကာခုံရုံးထိတက်တာပယ်ချလိုက်တယ်ဆို မနေ့ကဖေ့ဘွတ်မှာရှယ်ထားတာဘဲ
မြတ်ကြည် March 14, 2012 at 11:05 PM
Mg Lay, I have just heard about the facts, so I daren't writeatag post.. I think sooner or later, there will be exact explanation why we should give them our property land.
I hope our President won't nod his head like this. There must be some reasons. If it can be undone,we can state it to the international org about it. It's all of the ideas i have got.
I am not good in politics or political views but beingaMyanmar, I feel really sorry .. if that area is our country's property. It is suchagreat loss.
I hope you would be satisfied with my answers. :)
Snow March 14, 2012 at 11:39 PM
ဟုတ်တယ်..အဲဒီကိစ္စကို မနေ့ကကြားတော့..တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်.မနေ့က ဖေ့ဘွတ်မှာတော့.. အဲဒီအကြောင်း တော်တော်ပြောနေကြတယ် အဲဒီ LIke အများကြီးရတဲ့.ဆိုဒ်ကိုလည်း မြင်ပြီး. စိတ်ထဲမှာ. နိုင်ငံရဲ့.သယံဇာတတွေအတွက်. တော်တော်ဝမ်းနည်းမိပါတယ်..တဂ်ပို့စ်ရေးဖို့ကြိုးစားမှာပါ.. တကယ်ဆုံးရှုံးသွားတာသေချာလားဆိုတာကိုတော့.. ဒီနေ့စာတွေဖတ်ကြည့်ရဦးမယ်.
ရင်ဆူး March 15, 2012 at 12:02 AM
ညီလေးရေ အစ်ကိုလည်း အဲ့ဒီကိစ္စကြားပြီးကတည်းက ဖေ့စ်ဘုတ်ကိုမကြည့်ချင်တော့တာနဲ့ လိုင်းပေါ်ကိုလုံးဝ မတက်တာ .....ဒီနေ့မနက်မှ.....ဘာထက်ထူးလည်းဆိုပြီးကြည့်မိတော့တယ်ညီရေ......တွေ့တွေ့ချင်း လာခဲ့ပါတယ်....ငါ့ညီဘာတွေရေးထားလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့..အစ်ကိုလည်း ဘာမှမပြောချင်ဘူး.....ပြောချင်စိတ်လည်းမရှိဘူးညီရာ....မေ့လို့မရသေးပေမဲ့....အဆင်ပြေတဲ့အချိန်တော့ အစ်ကိုကြိုးစားရေးပေးပါမယ်.....ဒါပေမဲ့ ရင်ဆူး.....စာမရေးတတ်ဘူးညီရဲ့.......သူများတွေရေးတာလောက် မပြည့်စုံ ဖတ်လို့မကောင်းလည်း သည်းခံပေးကွာ......ဒါပဲ.....မပြောချင်တော့ဘူး....စိတ်လေတယ်.......မဲမဲမြင်၇င် တီးချင်နေတယ်.....
အလွမ်းခရီးသည် March 15, 2012 at 3:20 AM
မေလဲ ကြားတော့ မျက်ရည်ကျတယ်
ဒီည အလုပ်ပြီးရင် အဲ့ဒီအကြောင်းရေးမယ်လို့ စိတ်မှာတွေးထားတယ်
မေ ရေးရင် နည်းနည်း ပြင်းထန်ချင်ပြင်းထန်နေလိမ့်မယ်
ဘာလို့ဆို မဟုတ်မခံ တတ်တဲ့ စိတ်နဲ့ ပြောစရာရှိ ထည့်တိုး ပြောတတ်တဲ့ အကျင့်ကြောင့်ပဲ
ချစ်စံအိမ် March 15, 2012 at 6:30 AM
Candy March 15, 2012 at 7:19 AM
အစ်မတောင် ဒီကိစ္စခုမှ သိတာ.. >.<
mstint March 15, 2012 at 7:11 PM
cool emerald March 16, 2012 at 12:58 AM
ကျော်ကိုကို မပါဘူးလား ဆိုလို့ စိတ်တိုသွားတယ် ဆိုလို့ တော်တော် စဉ်းစား လိုက်ရတယ်။ နောက် မှ ကျော်ကိုကို ဆိုတာ ဘော်လုံးသမား ထင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းမိတယ်။ အဲဒီ သူငယ်ချင်းက ပိုင်နက်ကိစ္စ ကို မသိလို့ စိတ်တိုတာကိုး။
ငါကိုလဲ ကျော်ကိုကို ကိုတောင် မသိတဲ့သူဆိုပြီး အဲဒီ သူငယ်ချင်းက ပြန်စိတ်တို နေဦးမယ်။ ဟဲ ဟဲ။ ဘင်းဂလား နိုင်တယ်ဆိုတာ ဘင်းဂလားဝန်ကြီးရဲ့ လေသံလို့ပဲ ထင်ပါတယ်။ စိတ်တိုစရာကြီး ဟင်း ဟင်း ဟင်း ။
တရားရုံးရဲ့ အချက်အလက် အမှန်အကန်တွေက ဒီထဲမှာပါ။
လက်ဝဲ March 16, 2012 at 5:12 AM
ရင်ဘတ်ကြီးကတော့ လေးပြီးရင်း လေးရင်း
သေသေချာချာ လေ့လာပြီးရင် ရေးပေးပါ့မယ် ဘရာသားရေ
Z@! March 18, 2012 at 9:14 PM
အကိုရေ နောက်ကျသွားတာ တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ. ရေးပြီးတာကတော့ အကိုတဂ့်တဲ့ နေ့ကတည်းကပါပဲ ဒါပေမယ့် အင်တာနက် မဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ ခုတော့ တင်ပြီးသွားပါပြီ။
jasmine(တောင်ကြီး) March 19, 2012 at 12:17 AM
ရေးချင်တယ် မရေးတတ်လို့ လိုက်လို့မမှီဘူးအဲတာကြောင့်မရေးဖြစ်တာ
အမက ကဗျာနဲ့ ချစ်တာမုန်းတာလွမ်းတာလောက်သိတာလေ
generals August 11, 2012 at 7:19 AM
မြန်မာမျိူးချစ်တသိုက် ကဒီမှာကိုး တွေ့ ရတာ ဂုဏ်ယူပါတယ်ခင်ဗျာ